Rafitra fisie: iza no hofidiana ho an'ireo kapila sy fizarako amin'ny Linux? | Avy amin'ny Linux
Rafitra fisie: iza no hofidiana ho an'ireo kapila sy fizarako amin'ny Linux?
Amin'izao fotoana izao, Rafitra miasa maimaim-poana sy misokatra miorina amin'ny GNU / Linux manohana isan-karazany ny Rafitra fisie (rakitra), na dia mety ho ny be mpahalala sy / na efa niasa aza dia mbola io ihany EXT4.
Fa raha ny marina: Inona no tokony ho mety indrindra amin'ny fampiasana omentsika ny fizarana, kapila, rafitra miasa na solosaina? Inona avy ireo tombony sy fatiantoka ananan'ny olona iray noho ny iray hafa?
Araka ny efa nambarantsika teo aloha, ny mety ho be mpampiasa sy be mpampiasa indrindra Rafitra fisie amin'ny GNU / Linux, alaivo ny ankehitriny EXT4. Izany dia noho ny:
"... el Rafitra fisie maharitra (EXT), no rafitra fisie voalohany noforonina manokana ho an'ny Linux Operating System. Namboarin'i Rémy Card izy io handresena ny fetran'ny MINIX File System. Izy io dia nosoloin'ny EXT2 sy ny Xiafs, izay nisy ny fifaninanana, izay nandresy tamin'ny ext2, noho ny fahaizany maharitra.".
Izany hoe, ny Rafitra fisie EXT, saika manana ianao 30 taona mivoatra. From kinova 1 tamin'ny 1992, mandalo ny azy kinova 2 tamin'ny 1993ny kinova 3 tamin'ny 2001, hatramin'ny maoderina Rafitra fisie EXT4 Navoaka izany tamin'ny taona 2008. Mandritra izany fotoana izany, nanomboka teo, maro ireo rafitra File hafa no nahita ny fiainana ho fomba hafa amin'ny iray ankehitriny EXT4 miaraka amin'ny toetra sy fahasamihafana miavaka.
1 Rafitra fisie ao amin'ny GNU / Linux
1.4 Ny hafa tsy dia be mpampiasa na tsy fantatra
Rafitra fisie ao amin'ny GNU / Linux
Avy eo dia ho hitantsika ireo toetra miavaka indrindra amin'ny tsirairay, mba ho hitanao hoe iza amin'ireo no mety kokoa amin'ny tranga manokana.
Navoaka tamin'ny 2008 izy.
Ny anarany dia mijoro ho an'ny fisie fahefatra miparitaka fahefatra.
Raha ampitahaina amin'ny EXT3 taloha dia haingana kokoa, izany hoe, misy fanatsarana ny hafainganan'ny famakiana sy ny fanoratana, ary tsy dia mora zarazaraina. Izy io koa dia afaka mitantana ny rafitra fisie lehibe kokoa (hatramin'ny 1EiB = 1024PiB) sy ny fikirakirana rakitra lehibe kokoa (hatramin'ny 16TB). Ary koa, manome fampahalalana marina momba ny daty amin'ny rakitra, manana fampiasana CPU ambany.
Ity no andiany faharoa tamin'ny andiany EXT ho Rafitra Transactional File, izany hoe manana rafitra mampihatra ny fifanakalozana na ny firaketana ny diary, amin'ny fomba hitahiry ny vaovao ilaina hamerenana amin'ny laoniny ny angona voakasiky ny fifanakalozana raha sanatria tsy nahomby io.
Manana fanohanana "malalaka" izy io. Ny "Extent" dia ny fanoloana ny drafitra fanakanana nentim-paharazana ampiasain'ny rafitra fisie EXT 2/3. Ny "Extent" dia andian-jirony ara-batana mifanakaiky, izay manome ny File System fahafaha-manatsara ny fahombiazany rehefa miasa miaraka amina rakitra be dia be ary mampihena ny sisan-javatra.
Ireo sy ireo endri-javatra hafa dia mahatonga azy io ho azo ampiasaina amin'ny solosaina an-trano sy ny mpampiasa birao, izay tsy mitaky fampiasana mahery ny File System. Ireo fiasa tsara sy ny fiasan'ny tsara dia ampy ho an'ny mpampiasa betsaka indrindra sy fampiasana solosaina misy fampiasana antonony, izany hoe ireo mahazatra. Na dia izany aza, ny fampiasana azy amin'ny mpizara miaraka amin'ny fangatahana ambany na fandidiana dia tsara ihany koa.
Izy io dia manana endri-javatra maro hafa miavaka kokoa, fa azo itarina ao amin'ny tranonkalan'ny kernel.org, ary ao amin'ny lahatsoratra manokana ao amin'ny tranonkala openource.com.
XFS no antitra indrindra amin'ireo rafi-drakitra fanaovan-gazety misy amin'ny sehatra UNIX. Orinasa SGI (izy io no nantsoina taloha hoe Silicon Graphics Inc.) no namorona azy ary navoaka tamin'ny 1994. Tamin'ny Mey 2000, SGI dia namoaka XFS tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana open source, izay namela azy hiditra amin'ny Linux avy amin'ny kinova 2.4.25. XFS dia manohana rafitra fisie hatramin'ny exabytes 9, ho an'ny 64 Bit ary 16 terabyte ho an'ny 32 Bit.
XFS dia rafitra fisie izay mampihatra ny fanaovan-gazety, ary koa 64-bit matanjaka sy azo ovaina. Miorina tanteraka amin'ny extension izy io, noho izany dia manohana rakitra lehibe sy rafi-drakitra lehibe dia lehibe izy io. Ny isan'ny fisie azon'ny rafitra XFS voafetra dia tsy voafetra afa-tsy amin'ny habaka misy ao amin'ny rafitra fisie ihany.
XFS dia manohana ny diary metadata, izay manamora ny fanarenana haingana amin'ny fianjerana. Ny rafi-drakitra XFS koa dia azo atao defragmented sy mivelatra rehefa miangona sy miasa.
Ireo sy ireo fiasa hafa dia mahatonga azy io ho azo ampiasaina amin'ny Servers, indrindra ny fangatahana na fandidiana avo lenta, izay mitaky fampiasana mahery ny rafitry ny rakitra ary ny rafitra matanjaka kokoa amin'ny famerenana azy io sy ny angona voarakitra ao. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ireo Servers izay mitantana rakitra mamaky / manoratra kapila lehibe, tahiry karazana irery na mitantana ny fizarana webhosting iraisana, ankoatry ny rindranasa hafa.
Izy io dia manana endri-javatra maro hafa miavaka kokoa, fa azo itarina ao amin'ny tranonkalan'ny Redhat.com, ary ao amin'ny lahatsoratra manokana ao amin'ny tranonkala mg.qwe.wiki.
Btrfs (B-Tree FS) dia rafi-drakitra maoderina ho an'ny Linux izay mikendry ny hampiditra endri-javatra mandroso nefa miaraka mifantoka amin'ny fandeferana amin'ny lesoka, fanarenana ary fitantanana mora.
Niara-namolavola orinasa marobe izy io, saingy nahazo alalana tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana GPL ary misokatra ho an'ny rehetra handray anjara.
Izy io dia manana endri-javatra tsara indrindra hitantanana fitehirizana lehibe, ary mamantatra, manamboatra sy mandefitra ny lesoka amin'ny tahiry voatahiry ao anaty kapila.
Izy io dia mitantana ny fitehirizana amin'ny fomba mitambatra, mamela azy hanolotra fihenam-bidy amin'ny rafitra fisie napetraka.
Btrfs dia mampiasa ny asan'ny Copy-on-Writing (CoW), mamela ny sary azo vakiana fotsiny na azo ovaina, ahitana ny fanohanan'ny zanatany ireo rafitra fisie maro-fitaovana ary manohana ny fitantanana ny habetsaky ny boky. Ankoatr'izay, miaro ny fampahalalana (data sy metadata) amin'ny alàlan'ny checkum (checkus), manohana ny famoretana, fanatsarana ny kapila SSD, famonosana rakitra kely mahomby sy ny maro hafa.
Ny codebase Btrfs dia mbola eo an-dalam-pandrosoana maharitra mba hahazoana antoka fa mijanona ho marin-toerana sy haingana izy io, ary azo ampiasaina amin'ny toe-javatra rehetra. Ny hafainganam-pandehan'ny fampandrosoana dia midika fa mihatsara amin'ny endriny vaovao amin'ny Linux, noho izany dia ampirisihina mafy ny mpampiasa hitantana ny kernel farany azo atao raha hampihatra izany izy ireo.
Ireo sy ireo endri-javatra hafa dia mahatonga azy io ho azo ampiasaina amin'ny Workstations sy Servers be asa. Satria izy dia miavaka amin'ny fahaizany tena tsara, indrindra ireo efa mandroso izay, amin'ny ankapobeny, dia tarihina mihoatra ny fanatsarana ny fahombiazany fotsiny, izany hoe mifantoka bebe kokoa amin'ny fitantanana fitehirizana sy fiarovana.
Izy io dia manana endri-javatra maro hafa miavaka kokoa, fa azo itarina ao amin'ny tranonkalan'ny kernel.org, ary ao amin'ny lahatsoratra manokana ao amin'ny tranonkala elpuig.xeill.net.
Ny hafa tsy dia be mpampiasa na tsy fantatra
Fitsaharana, GNU / Linux afaka mitantana amin'ny fomba feno na amin'ny ampahany ny hafa Rafitra fisie tsy tompon-tany, ho an'ny kapila sy fizarana toy ny FAT32, exFAT ary NTFS de Windows, HFS + sy AFS de Apple. Rafitra fisie F2FS, UDF eo akaikiny exFAT ho an'ny kapila fitahirizana ivelany na flash (kapila). Ary ho an'ny tambajotra, toa NFS (ampiasaina hizarana loharano eo amin'ny masinina Linux) na SMB (hizara loharano eo amin'ny masinina Linux sy Windows).
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny «Sistemas de archivos», ao aminay «Distros GNU/Linux» hahafantatra bebe kokoa hoe iza no mety ho antsika «discos o particiones», dia mahaliana sy mahasoa be, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Rafitra fisie: iza no hofidiana ho an'ireo kapila sy fizarako amin'ny Linux?
Miguel Mayol Tur dia hoy izy:
Fa malahelo ny fanehoan-kevitra momba ny fahaizako "manova ny habeny" amin'ny fizarana habe.
Tsy avela ny XFS sy ny BTRFS
Mampiasa XFS sy EXT4 aho izao, ny tombony azon'ny XFS izay ampiasako azy dia rehefa fahavaratra dia tsy dia misy vokany eo aminy ny hafanana - zatra nanimba ny fizarazaran-tany azo ovaina indrindra tamin'ny hafanana aho tamin'ny fahavaratra ary hatramin'ny nanovako azy ho XFS intsony -
Fa ny EXT4 noho ny fahafahany "manova ny habeny" sy ny zava-bitany tsy lavitra ny hafa dia nahazo ny foko-
Valiny tamin'i Miguel Mayol Tur
Miarahaba anao, Miguel. Misaotra anao tamin'ny hevitrao sy hevitrao tamin'ny zavatra niainanao manokana!
dhouard dia hoy izy:
Amin'ny tranga misy ahy dia mampiasa BtrFs aho ho an'ny fizarazaranay, ary XFS ho an'ny fizarazaran-trano / an-trano.
Voalohany, tiako ny fahaizako miaraka amin'ny snapper, hiverina amin'ny fanjakana teo aloha raha toa ka diso ny fanavaozana na ny "fiddling".
Mamaly an'i dhouard
Miarahaba anao, Dhouard. Misaotra anao tamin'ny hevitrao sy hevitrao tamin'ny zavatra niainanao manokana!
Alfonso Barrios D. dia hoy izy:
famoahana tena tsara fa toa hitako fa raha nanokana fotoana ianao hilazana ny tombotsoan'ny rafitra fisie linux dia azonao atao ihany koa ny manisy antsipirihany ny tombotsoan'ny rafitra fisie sy ny windows
Ny ambiny tiako be ilay lahatsoratra, nosoratana tsara
Valiny tamin'i Alfonso Barrios D.
Miarahaba anao, Alfonso. Misaotra tamin'ny hevitrao. Mazava ho azy fa tsy ho zavatra ratsy ny fampidirana azy ireo. Azo antoka fa ho fanavaozana manaraka ity lahatsoratra ity.
Vehivavy, rindrambaiko maimaim-poana ary loharano misokatra: Finaritra 8 martsa!